ZTE Quartz no Android Wear voalohany an'ny mpanamboatra sinoa | Vaovao momba ny gadget
Misy mpanamboatra maro izay nihoatra ny fandefasana fitaovana azo ampiasaina eny an-tsena toy ireo famantaranandro marani-tsaina ireo. HTC sy ZTE dia anisan'ireo mpanamboatra ireo ireo izay mbola antenaina hiditra amin'ny tsenan'ny akanjo anaovan'ny ankamaroan'ny marika lehibe ny tolo-kevitr'izy ireo.
Androany isika manana ny famoahana momba ny mety ho smartwatch ZTE voalohany, ny ZTE Quartz. Ora vitsy monja talohan'ny nanolorana ny Android Wear 2.0 Ao amin'ny LG Watch Sport sy LG Watch Style, efa afaka manokatra manaikitra isika alohan'ny andrana voalohany tokoa avy amin'ny mpamokatra Koreana hanana akanjo Android Wear azo entina eny an-tsena mandritra ny volana vitsivitsy.
Azontsika atao ny milaza fa manana izany marika lehibe hafa manakaiky ny tsenan'ny akanjo azo ovaina izay mbola hipoitra avy amin'ny fandavan'ny besinimaro ny fandoavana fitaovana hafa entina miaraka aminy isan'andro
Ny ZTE Quartz dia vokatra an-tanan'ny mpanamboatra sinoa miaraka aminy hatramin'ny taranaka faharoa sy fahatelo ny ranomainty marika marobe toa ny LG na Motorola.
Tsy mahafantatra firy momba ny famaritana ny Quartz izahay, satria ireo ananantsika dia misaotra ny Fanamarinana Bluetooth izay misy ny fifandraisana Bluetooth, WiFi ary ny fifandraisana finday UMTS 3G.
Ara-pahitana sy amina endrika, Quartz dia manana endrika boribory ary azo ampiarahina amin'ireo telefaona Android izay manana kinova 4.3, hetsika izay tsy tokony hahagaga raha ny tobin'ny mpampiasa no ananan'i ZTE. Ny famantaranandro koa dia hanohana ireo iPhones mihazakazaka iOS 8.1. Tsy fantatray ny vidiny sy ny daty namoahana an'ity famantaranandro ity.
Ny zavatra mahaliana dia ny hahafantarana raha hiditra amin'ny Android Wear 2.0 izy, na dia eo aza ny daty, raha atomboka amin'ny volana manaraka, dia azo antoka fa afaka miantehitra amin'ny ny sasany amin'ireo fahaiza-manao fa hanana ny LG Watch Style sy Watch Sport izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » ZTE Quartz no ho Android Wear voalohany azo anaovan'ny mpanamboatra sinoa